Mogadishu Journal » 2021 » May » 1
Muxuu Shiikh Shariif ka yiri go’aanka golaha shacabku ku joojiyey Muddo kororsiga?
Madaxweynihii hore ee Somalia Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa soo dhoweeyey go’aanka golaha shacabka ay maanta gaareen oo dalka dib ugu celiyey heshiiskii doorasho ee 17 September, loogana laabtay muddo kororsiga. Qoraal ii bartiisa facebook soo dhigay Shariif ayaa u qornaa...
RW Rooble oo War ka soo saaray arrimaha doorashada iyo amniga lagu wareejiyey
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda in uu wareejiyay mas’uuliyadda doorashooyinka. Ra’iisul Wasaare Rooble oo Golaha Shacabka uga mahadceliyay in sida ay u tixgeliyeen codsigii...
Qeybtii ugu dambeysay Ciidamada Maraykanka oo ka baxaya Afghanistan (Sawirro)
Wajiga ugu dambeeya ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa si rasmi ah u billaabmaya Sabtida maanta ah, tallaabadan oo billow u ah dhammaadka dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee uu Mareykanka galo, ka dib muddo 20 sano ah oo ciidamadiisu dagaal ka wadeen...
Ergeyga dowlada Qatar u soo dirtay Soomaaliya oo soo gaaray Muqdisho (Sawirro)
Ergeyga Gaarka ah ee dowlada Qatar u soo dirtay Somaia Dr. Mutlaq Al-Qahtani ayaa galabta soo gaaray magaalada Muqdisho. Garoonka dayuuradaha ayaa waxaa ku soo dhoweeyay Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda Somalia Balal Cusmaan iyo masuuliyiin kale. Dr. Mutlaq ayaa Muqdisho kulamo...
Madaxweyne Farmaajo oo Hooshada Doorashada iyo Amniga ku wareejiyay R/W Rooble
Muqdisho:-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo goordhaew khudbad xasaasi ah u jeediyay Xildhibaanada golaha shacabka oo maanta isugu yimid kulan aan caadi aheyn uu dalbaday Madaxweynaha. Farmaajo ayaa khudbadiisa uga hadlay arimo kala duwan oo ugu...
Xildhibaanada golaha shacabka oo ka laabtay Sharcigii Jiheynta Doorashada ee Mudo kororsiga
Waxaa maanta kulan aan caadi aheyn xarunta Villa Hargeysa isugu yimid Xildhibaanada golaha shacabka ee Baarlamanaka federaalka Soomaaliya, kadib markii Madaxweynaha codsaday in Xildhibaanada la hadlo. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday Xildhibaanada in ay ka laabtaan sharciga...
Deadly blaze breaks out in a COVID-19 ward as India becomes first country to have more than 400,000 cases in one day. 1 May 2021 A fire in a COVID-19 hospital ward in western India killed 18 patients as the country grappling with the world’s worst outbreak stepped up a...
Madaxweyne Farmaajo oo goordhaw War Saxaafadeed soo saaray (Akhriso)
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa War Saxaafadeed uu soo saaray uga hadlay maalinta Shaqaalaha aduunka oo maanta ku beegan, waxa uuna hambalyo u diray dhamaan shaqaalaha Soomaaliya. Qoraalka Madaxweynaha ayaana u qornaa sida tan: Maalinta Shaqaalaha...